भारतीय मिडिया किन झुकिरहेछ मोदिसंग ? भारतमा लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा - सिम्रिक खबर
भारतीय मिडिया किन झुकिरहेछ मोदिसंग ? भारतमा लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा
गएको शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक एवं सामाजिक परिषदमा एउटा भर्चुअल भाषण दिए । जहा उनले “भारतले कोभीड १९ का विरुद्ध लडिरहेको आन्दोलनलाई जनआन्दोलन बनाईदिएको ” सुनाए ।
मोदिले दिएको यस बयानलाई भारतीय मिडियाहरुले खूब महत्व दिए, तर अचम्म यो छ कि उनले गरेको यस दाविलाई कुनैपनि मिडियाले चुनौती भने दिएनन । कुरा के हो भने मोदिले भाषण दिईरहँदा कै दिन भारतमा संक्रमितहरु १० लाख लाख पुगेका थिए । प्रत्यक दिन नयाँ केशहरु थपिदा यता नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ ।
संचार माध्यमहरु प्रमाण के हो भन्ने पट्टी लागेनन् । यसको ठिक बिपरित भारतीय सामाजिक संजालमा हजारौं नागरिकहरुले आफ्ना दुःखका कथाहरु पोखिरहेका थिए । बिरामिहरु अस्पतालको चक्कर काटिरहेका छन् र सामान्य मानिसहरु गाडिमै आफ्नो अन्तिम सास लिईरहेका समाचारहरु समेत आईरहेका छन् ।
२४ मार्चमा जब प्रधानमन्त्री मोदिले लकडाउनको घोषणा गरे, उनले दावि का साथ भनेको थिए कि मात्र २१ दिनमा कोरोना नियन्त्रण गरिने छ । तर यतिका महिना बितिसक्यो, कोरोनाको महामारीले भारत नराम्ररी गाँजिईरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदिले कोरोनाको नियन्त्रण गर्न गरेको बाचा प्रति कसैले पनि सिधा प्रश्न सोधेका छैनन् । यो कुरा ठिक हो कि भारतमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा पहिले भन्दा राम्रो छ । अस्पतालमा बेड संख्या धेरै छन्, आईसियु युनिट पनि धेरै छन्, टेस्ट किट र अस्पतालहरु पनि धेरै नै छन् । तर पनि आम मानिसहरुको दुःख अझ बढ्दो छ । जहाँ मानिसहरु कोरोना विरुद्ध जनआन्दोलन गर्न सक्ने कुनैपनि हालतमा छैनन् । यो त मात्र फ्रन्टलाईनका डाक्टरहरु, मेडिकल कर्मचारीहरु र प्रशासनको लडाई बनिरहेको छ ।
बरिष्ठ भारतीय पत्रकार पंकज बोहोरा भारतीय मिडियोहरु प्रति अफसोच प्रकट गर्छन् । “जागरुक हुनु नै प्रजातन्त्रको मूल्य हो, तर भारतीय मिडियाले आफ्नो आलोचनात्मक प्रशंसाको भूमिकालाई पूर्ण रुपमा निभाउन सकेनन् ।”
आफ्नो परिचय बताउन नचाहने लण्डनमा भएका एक भारतीय शिर्ष पत्रकारका अनुसार केहि वर्ष देखिको ट्रेण्ड स्पष्ट छ, भारतीय मिडिया सरकारको ईसारामा चलिरहेका छन ।
उनका अनुसार “भारतमा कोरोनाको विषयलाई लिएर जुन तरिकाले संचार माध्यमले कभरेज गरिरहेका छन्, त्यो उनीहरुले निभउँदै आएको पारम्परागत भूमिकाको विरुद्धमा छ । संचार माध्यमले संधै सत्ता चलाउने व्यक्तिहरुलाई जिम्मेदार ठान्छ । यहाँ संचार माध्यमले भूमिका र बास्तविकताको पनि तुलना गर्नुपर्छ । भारतमा अहिले यो कुराको दूरि यति धेरै बढेको छ कि जहा त्यस्तो कहिल्य भएको थिएन ।”
शुरुदेखिनै अमेरिकाको शिकागो युनिभर्सिटिमा कानून र राजनैतिक विज्ञान पढाउने प्रोफेसर टम गिसवर्गले प्रधानमन्त्री मोदिको उदयलाई सुक्ष्म रुपमा नियालिरहेका छन् । भारत आउजाउ गरिरहने प्रोफेसर टम भन्छन् किन भारतमा मिडिया अहिले आफ्नो बाटोभन्दा बाहिर देखिईरहेको छ ?
प्रधानमन्त्री मोदिको भूमिकाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने “भारतमा संचार माध्यम नियन्त्रणमा छ, किनकी उनीहरुका मालिक प्रधानमन्त्रीका साथी हुन, साथै भारतमा पत्रकारहरुलाई अत्यन्तै डर धम्की दिने गरिन्छ ।”
आधिकारिक रुपमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कुनैपनि च्यानलको मालिक छैन । तर पनि भारतका ठूला समाचार संस्थाहरु प्रधानमन्त्री मोदिको पक्षधर देखिन्छन् । या त उनीहरु हिन्दूवादी विचारधारालाई समर्थन गर्छन कि कुनै प्रकारले संंस्थाका मालिकहरु सत्ताधारी पार्टीसंग जोडिएका छन् । कतिपय पार्टीका क्षेत्रीय सहस्यहरु समेत संचारमाध्यमका मालिकका रुपमा छन् । त्यसैले यि समाचार संस्थाहरुले पार्टीका पक्षमा एक किसिमको माहोल तयार गरिरहेछन् ।
भारतीय सरकारले पत्रकारलाई धेरै डर र धम्की देखाई पत्रकारहरुको पत्रकारीता प्रभावित गरेको भनी धेरै आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । यस बिषयमा विश्वको मिडिया स्वतन्त्रता सूचि हेर्दा भारतको प्रर्दशन लगातार गिर्दो अवस्थामा देखिन्छ । एक आकंड़ा अनुसार यता भारतको प्रशासनले पत्रकारहरुका विरुद्ध अभियोगहरु लगाउने क्रम निरन्तर बढ्दो देखाएको छ ।
प्रोफेसर टम भन्छन् व्यक्तिगत लोकप्रीयता चाहने नेताहरु कुनैपनि संस्थाहरु प्रति तिरस्कार गर्ने हुन्छन् । उनी भन्छन् “ ब्राजील, भारत र अमेरिकामा लोकप्रीयता रुचाउने नेताहरु छन्, उनीहरुलाई कुनैपनि संस्था मन पर्दैन, उनीहरुलाई त्यस्ता मानिसहरु पनि मन पर्दैन कि जसल उनीहरुको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्छ । अचम्मको कुरा के छ भने, यि तीनै देशका नेताहरु कोरोना बिरुद्धको लडाईमा असफल छन्, हामि देख्न सक्छौं यि तीनै देशमा कोरोनाको संक्रमण दैनिक बढिरहेको छ ।”
अमेरिकाको जोन हप्किन्स युनिभर्सिटिको ड्यासबोर्ड आंकडा हेर्ने हो भने विश्वका तीन देशमा कोरोना संक्रमण सबैभन्दा बेसि छ । जहाँ पहिलो अमेरिका, दोश्रो ब्राजिल र तेश्रो भारत हो ।
जोन हप्किन्स युनिभर्सिटिका प्रोफेसर स्टीव हेके भन्छन् संसारको सबै जनवादी नेता विश्वको संकटलाई दुरुपयोग गरी सत्ता हत्याउने बाटोमा लागेका छन् । उनी भन्छन् “ केही समय पछि संकट त सकिन्छ नै साथै उनका हातमा सत्ता पनि रहिरहन्छ ।”
यहि कुराको आधारमा मोदीले कोरोना भाईरसका विरुद्धको लडाईलाई “जनआन्दोलन” बताएको उनको दबी छ।
प्रोफेसर हेके भन्छन् “ कोरोना महामारीका बेला मोदिले सम्पूर्ण भारतीय मिडिया आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ । मोदी जे चाहन्छन् मिडिया त्यहि देखाईरहेको छ । सबै भारतीय मीडियामा सरकारले कोरोनासंग लड्नका लागि गरेको सकरात्मक र प्रेरणादायि भूमिका मात्र ब्याख्या हुन्छ । ”
(बिबिसिका हिन्दीका पत्रकार जुबैर अहमदको आलेखबाट सम्पादित एवं अनुबादीत)